Mbola mitohy ny fanaovam-baksiny eny amin'ny faritra rehetra, nilaza moa ny Filoham-pirenena fa efa miparitaka manerana ny nosy izany, nomarihiny tsara fa tsy atao an-katerena ny fanaovana izany fa an-tsitra-po. Ho an'ireo toerana izay miomana ho an'ny fandraisana mpizahan-tany dia misy ihany koa ny hetsika manokana amin'ny fanaovana vaksiny toy ny any Nosy Be sy Sainte Marie. Antsoina ary ireo olona rehetra tsy ankanavaka mihoatra ny 55 taona mpisehatra eo amin'ny fizahantany amin'ireo toerana roa ireo mba hisoratra anarana avokoa izay mikasa sy maniry hanao izany vaksiny izany ary hisy toerana manokana antokana hanaovana izany.
Ho an'i faritra Atsinanana manokana dia mbola mitohy izany hetsika fanaovam-baksiny izany ka eny amin'ny "Dispensaire Urbaine" etsy amin'ny hopitaly kely ihany no manao azy amin'izao fotoana izao raha toa ka nizara telo teo aloha.
Araka ny fanazavana voaray sy fanentanana nataon'i Dr Norovoahangy misahana ny serasera eo anivon'ny talem-paritry ny fahasalamana dia afaka manao izany avokoa ny tsirairay avy manomboka izao.
Entanina ny tsirairay avy ao anatin'ny fikambanana na nohon'ny asa dia mifanerasera amin'ny olona maro dia afaka manantona, na tsy ao anatin'ireo sokajy taona ireo dia afaka manatona ka mitondra ny karapanondro. Ankoatran'izay ho antsika rehetra izay manana aretina mampisalasala dia hentanina foana ho tonga satria tombony ho antsika ny ahafahantsika misitraka io vaksiny io sy ny mahazo ny toromarika ara-pahasalamana ho anao manokana.
(224) S.Lantomalala : 01-06-2021 - 10:30